Mety ho Nutella ve no anarana ho an'ny Android N? | Androidsis
Moa ve ny filoha lefitry ny Android manodikodina antsika sa marina fa i Nutella no ho anaran'i Android N?
Google dia nangataka anay handray anjara amin'ny fandraisana andraikitra ampio izy ireo hanome anarana Android N. Ny karazana tolo-kevitra rehetra dia nipoitra ary na dia ny anarana somary mahavariana toa an'io Android Nachos io aza, saingy mbola te hahafantatra izay ho anarana homena an'io kinova vaovao io izahay izay hiaraka amintsika amin'ity fahavaratra ity, farafaharatsiny amin'ny fitaovana Nexus .
Tsy dia haiko loatra raha te hampiala kely anay izy ireo, saingy i Hiroshi Lockheimer, filoha lefitry ny Android, Chrome OS ary ny Play Store, toa mazava be ny azy mifandraika amin'i Nutella ho anarana nofidina ho an'ny kinova manaraka an'ny OS ho an'ny fitaovana finday. Tsy ho gaga koa isika raha izany rehefa avy namakivaky ny Android 4.4 KitKat.
Ary i Lockheimer no naka ny azy Twitter hanakorontanana azy mba hanehoana ny pikantsary amin'ny biraonao izay mampiseho fikarohana Internet ho an'i Nutella. Fantatsika sahady fa manana ny filàzany mialoha amin'ity sôkôla ity izy izay maro mpankafy eran'izao tontolo izao, satria tsy vao sambany no nanehoany ny fitiavany an'io sakafo matsiro io. Tamin'ny herinandro lasa dia nizara sary iray hafa momba ny menio tsindrin-tsakafo iray misy an'i Nutella Pizzetta izy.
Fantatsika ihany koa fa ity karazam-baovao atsipy any amin'ny sibylline ity dia mampiely sy manangona azy ireo andrasana bebe kokoa noho ny fahalalana ny anaran'ny Android N. endrika marketing tena tsara ary amin'ity indray mitoraka ity dia hitarika antsika amina tsindrin-tsakafo mamy iray hafa izay maro amintsika no nalain'ny fakam-panahy hanaparitaka izany amin'ny mofo na amin'ny sandwich aza.
Na izany na tsy izany dia hitandrina isika ny amin'ny mety hanombohantsika miantso Android Nutella amin'ny kinova manaraka amin'ity OS ity izay hiaraka amintsika amin'ity fahavaratra ity amin'ny fahatongavan'i Nexus vaovao. Tsarovy fa 6 andro lasa izay no nanambaran'izy ireo tsy ho ela dia ho fantatray ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Moa ve ny filoha lefitry ny Android manodikodina antsika sa marina fa i Nutella no ho anaran'i Android N?
Andriamanitra inona no anarana ratsy ...
OnePlus dia tsy handefa telefaona intsony amin'ity taona ity izay mampihena ny vidin'ny OnePlus 3
Hitohy ao amin'ny Clash Royale ny fanehoan-kevitra